Nzọụkwụ 10 iji wulite Atụmatụ B2B Twitter ka mma | Martech Zone
N’oge na-adịbeghị anya, m gụrụ na Twitter ka nwere ndị ọrụ okpukpu abụọ karịa nke LinkedIn. Site na plethora nke ngwa Twitter na mwekota, ịdị mfe nke na-eme ka tweets dịkwuo ukwuu dịkwa ukwuu. Dịka onye ọrụ B2B Twitter n'onwe m, m na-arụ ọrụ atụmatụ Twitter m oge niile iji gaa n'ihu iwulite ihe ndị a ma dọta ndị na-ege ntị kachasị mkpa. Ndị a bụ ụfọdụ atụmatụ m na-etinye:
Chọpụta lekwasịrị ndị na-ege ntị anya ịgbaso. M na-emezu ụzọ abụọ a dị iche iche… nke mbụ site na ị na-achọ data profaịlụ maka mkpụrụokwu nke metụtara ndị na-ege m ntị na nke abụọ, site na isoro ndị na-eso otu ụlọ ọrụ m nọ na ya. Usoro abụọ a dịtụ mfe iji ngwa ọrụ dịka TweetAdder. N'ezie, ahụbeghị m ngwá ọrụ ka mma maka ya! (Ee, nke ahụ bụ njikọ njikọta).
Kama ịjụ ndị na-eso ụzọ m ajụjụ niile, M juo ajuju nye ndị m chọrọ iso ma ọ bụ chọọ iwulite mmekọrịta. Accountsfọdụ akụkọ abụghị ndị m na-ege ntị, mana ha nwere ikike na ụlọ ọrụ ahụ yabụ m na-etinye ha. Ọ bụrụ na m tosiri ike, ha ga-agwa m okwu, ọbụnakwa na - akwalite m.
M ahu nagide nlekota oru mgbasa ozi iji chọpụta ohere iji nyere ndị ọzọ aka. Mgbe ị na-enyere ndị ọzọ aka, ọ na - edugakarị na ịme mmekọrịta azụmahịa nke ga - eme ka ọ bụrụ ego. Echekwala na ọ bụ na-enyere mmadụ aka n'efu… Site n'inyere ndị ọzọ aka na ngalaba aka gị, ụwa na-ele gị ka ị na-enyere ndị ọzọ aka. Ha huru na inyere aka, ha gha echeta… ma kpoku gi mgbe enyemaka choro.
M ahu nagide Ngwa Twitter iji nyere aka jikwaa ọchụchọ, ịgbaso, tweeting, na njikọta mkpụmkpụ. Twitter.com, saịtị ahụ, dị egwu maka nke a. Ma ngwa dị ka TweetDeck, Seesmic na Hootsuite dị egwu. Ha na-enye gị ohere ijikwa mkparịta ụka nke ọma karịa.
I kwuo iji kwalite profaịlụ m na saịtị dị ka Uzoamaka. Kama ịzụ ụmụazụ, nke bu uzo di egwu nke n’enye otutu tọn ndi na-eso spammy nke hapuru ubochi ka emechara, saiti dika TwitterCounter na-adọta ndi oru di egwu ndi n’eme ka mbanye ma oburu na ha choo m.
M na-etinyekarị aka mkparịta ụka na-arụ ụka ma jiri nkwanye ugwu rụọ ụka banyere mmegide m. Onye ọ bụla hụrụ ezigbo arụmụka… karịsịa na isiokwu na-emetụ aka. Kama ichegbu onwe m banyere ịkpasu ndị mmadụ iwe, m na-ele ya anya dị ka nzacha ndị folks m nwere ike ọ gaghị achọ ịzụ ahịa na agbanyeghị! Atụla egwu ịba n'ime esemokwu, naanị jiri nkwanye ugwu mee ya (n'agbanyeghị agbanyeghị njọ).
I kwalite… onye ọ bụla. Ọbụna asọmpi nke ndị ahịa m na asọmpi nke m na-adọta uche m. Nke bụ eziokwu bụ na ha na-ewepụta ụfọdụ ndụmọdụ na ozi dị ịtụnanya metụtara ndị na-ege m ntị. Site n'ikekọrịta ozi ahụ na ndị na - ege m ntị, ana m abawanye uru nke Tweeting m na ụmụazụ m… ọ bụghị ihe ọjọọ.
M na-agbalị ekwula okwu banyere onwe m. Ọ dịghị onye na-eche banyere gị na ihe ị na-eme. Ha na-eche banyere uru ị na-ewetara ha. Ọ bụrụ na m ga-anọghị n'ịntanetị ruo oge ụfọdụ, enwere m ike ịgwa ndị bekee ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na m na-aga ihe omume nke nwere ike ịbụ ewu ewu, M nwere ike tweet ya… mana nke ahụ bụ ka m nwee ike izute ndị na-eso ụzọ m. Aga m na-eme ihe n'eziokwu na m ngwa ngwa na-eleghara folks na-akpọsa ihe ha nwere maka nri ụtụtụ, wdg Ọ dịghị onye na-echegbu onwe… karịsịa folks na-achọ iwu ụlọ ahịa azụmahịa bara uru n'ịntanetị. Ihe nzuzu ahụ bụ maka Facebook. 🙂
M na-eji havehtags ka enwere ike. Jiri hashtags rụọ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ na-achọ nwere ike iwuli ọnụọgụgụ ndị mmadụ na-achọta ọdịnaya gị ma wuo ndị na-eso gị. Eledala ike nke akara ngosi #!
Ọ bụrụ na enweghị m ihe ọ bụla dị mma Tweet, M na-agbatị elu! Mgbe ụfọdụ, otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ ga-agafe na-enweghị onye kwesịrị ekwesị tweet si m. Odi m na nke ahu… ihe ikpeazu m choro ime bu iju ndi na eso uzo m na ihe na abaghi ​​uru!
Ọ bụrụ na inwere azụmahịa, ị ghọtara na ichere maka ekwentị nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mfe iji nwee ego. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na mkparịta ụka ahụ, ịkwesịrị ịdị na-eme ngwa ngwa n'ịkwọ ụgbọala, ịza ajụjụ, iduga, na itinye aka na mkparịta ụka na-eme ugbu a.
Ulo oru di na Twitter. Ndị ọchụnta ego na-enyocha gị na ndị asọmpi gị. Ndị ọchụnta ego na-achọ azịza. Ọ bụrụ na ịnọghị iji nyere ha aka, atụla anya na ha ga-achọ gị. Ikwesiri ịnọ n’ihu ha mgbe niile… na azịza ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị.
Jul 9, 2011 na 1: 37 AM
kedu ihe ị chọrọ iji nyochaa njikọ ịkekọrịta site na Tweets, ka ị na-eme?
Jul 9, 2011 na 2: 18 AM
M na-eji Hootsuite ma ọ bụ Bit.ly maka ijikọ. Ọ bụrụ na ọ bụ maka mkpọsa n'ezie, m ga-etinye koodu nsuso mkpọsa na ya ka m wee nwee ike ịhụ nleta na nchịkọta.
Jul 10, 2011 na 5:44 PM
Maka m B2B na twitter bụ maka mmekọrịta ụlọ 🙂
Jul 11, 2011 na 3:56 PM
Ezi ihe, Doug. Twitter bụkwa ebe dị mma iji lelee ọtụtụ egos na-amalite onwe ha. M dị ka ikpe mara dị ka onye na-esote mgbe ọ na-egosi igosipụta na bravado Twitter. Site na obere ezigbo, a na-ekerịta ọdịnaya ọhụrụ na Twitter, anyị na-ahụ oke osimiri nke retweets, ọtụtụ na-arụtụ aka n'otu isi mmalite. Otú ọ dị, e nwere ụzọ abụọ nke a si aba uru. Otu nwere ike mata na omume nke retweeting bụ windo nke ohere iji ghọta echiche nke onye ahụ nke ọma. I nwekwara ike iji ya ike nke ukwuu maka nyocha na-emekarị. Dị ka ị maara, enwere ngwa ngwa n'ebe ahụ iji nyere aka mee nke abụọ a nke ọma. Maka m, agbanyeghị, Twitter bụ mmalite dị mma iji nwee ma jigide mkparịta ụka bara uru na ndị folks. Ma nke a ka m chere bụ ebe ezigbo uru bara uru. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eme mkparịta ụka na Twitter, ọ gaghị eju m anya ịhụ ka ha gbatịpụrụ na ụlọ ọrụ gị, na ibe Facebook gị, na ndị na-etinye na Blog Talk Radio. Ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a na-eche banyere Twitter dịka ọwa ahịa ọzọ, mgbe ha agụbeghị akwụkwọ ruo n'ókè nke iji ya naanị soro ndị ahịa ha na-akparịta ụka. Na-agba akaebe ugbu a na mantra nke ROI ma ị nweghị ike inyere ma chee na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enweta ya. Otu dị ka ọ dị mgbe ọ bụla.
Mee 10, 2012 na 2: 09 PM
"M na-ajụ ndị m chọrọ iso ma ọ bụ chọọ iwulite mmekọrịta" kpọmkwem ajụjụ. Olee ụdị ajụjụ ị na-ajụ?
Mee 17, 2012 na 7: 19 PM
@ google-aa522cbe3de1ac803a0cf795b19e8a3a: disqus, ihe m na-ekwu na nke ahụ bụ na m na-ewepụta oge iji lelee profaịlụ na saịtị ha anya iji mata ezigbo ajụjụ na-egosi na emeela m ihe omume ụlọ akwụkwọ m. On Twitter, I always see people autorespond with things like “Gwa m ihe akwụkwọ ị na-agụ”…. amam na ha enweghi ounce nke mmasi n'ihe m na agu. Kama, achọrọ m ịgụtụ gbasara ha ma jụọ ha ajụjụ naanị ha nwere ike ịza.
Dịka ọmụmaatụ - Ahụrụ m na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ecommerce na ọ dị ka ị na-arụ ọrụ na Magento? Anyị nwere ndị ahịa ole na ole na-eji Magento ma na-achọkarị ihe onwunwe site n'oge ruo n'oge iji nyere aka - ọ bụ ụdị ọrụ ị nwere ike ịrụ?
Feb 14, 2013 na 5:11 PM